Iphepha le-acrylic elikhutshiweyo Abavelisi kunye nabaXhasi - China iphepha le - acrylic extruded Ifektri
Iibhodi ze-acrylic ezenziwe ngaphaya zisebenzisa i-PMMA yeplastikhi ekumgangatho ophezulu yamashishini adumileyo ekhaya nakumazwe aphesheya njengezinto ezingafunekiyo kwaye yamkela indlela yokukhutshwa kwemveliso enkulu kunye nezixhobo eziphambili. Imveliso inokunyamezelana okuncinci kakhulu kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu.
I-1mm ye-Acrylic Sheet ekhutshiweyo iishiti ze-Acrylic zenziwa ngenkqubo yemveliso eqhubekayo. Iipilisi ze-Acrylic okanye ze-PMMA zondliwa ukusuka kwisisele sesikhongozeli ukuya kwi-feed hopper ngaphezulu komgca we-extruder.
1.okwakha: iifestile, iifestile neengcango ezingavakaliyo, imaski yemigodi, iindawo zeminxeba, njl.
2.ad: iibhokisi ezikhanyayo, imiqondiso, imiqondiso, umboniso, njl.
3. ezothutho: oololiwe, iimoto nezinye izithuthi, iingcango neefestile
4. Ezonyango: ukufukama komntwana, izixhobo ezahlukeneyo zonyango
5. izinto zikawonke-wonke: izixhobo zococeko, imisebenzi yezandla, izinto zokuthambisa, isakhelo, itanki, njl
I-acrylic ekwabizwa ngokuba yi-PMMA yenziwe nge-methacrylate methyl ester monomer. Ngophawu lokukhanya okucacileyo, uzinzo lweekhemikhali, amandla emozulu, kulula ukuwenza amabala, ukuqhubekeka ngokulula kunye nembonakalo entle, Isetyenziswe ngokubanzi kulwakhiwo, ifenitshala kunye nakumashishini wentengiso.